YAANYO "DABAYL ROSE": SHARAX, SIFOOYINKA IYO SIFOOYINKA LAGU KOBCIYO KALA DUWANAANTA - NOOCYO YAANYO
Faa'iidooyinka iyo faa'iido darrada ah ee Tomato "Wind Rose", gaar ahaan beerista yaanyada lafaha ah
Marka xulashada noocyo kala duwan ee yaanyada, fiiro gaar ah waa in la siiyaa noocyo kala duwan "Wind Rose". Iskuduwaha noocan oo kale ah ayaa ku habboon dadka deggan xagaaga ee ku nool cimilada isbeddelka leh, iyadoo roobab aan la saadaalin Karin. Beerashidu maaha mid aad u adag, laakiin geeddi-socodkani wuxuu sidoo kale leeyahay jumlado gaar ah, oo aan ku sharaxi doono isla markiiba ka dib sharaxaadda guud ee "Rose of Winds".
Fasalka "Wind Rose" waxaa matalaya xayiraadaha caadiga ah ee dhererka, iyagoo gaaraya dhererka 35-45 cm Cagaarka - cagaar, dhexdhexaad ah oo cagaar ah iyo waxoogaa dardar leh, tiro cagaaran - badan.
Faa'iidooyinka ugu muhiimsan ee xulashada noocyo kala duwan waxaa ka mid ah dhadhanka wanaagsan ee miraha, tayada haynta hagaagsan, beeritaanka geeddi-socodka, taas oo ay ugu wacan tahay dhirta uma baahna qaabaynta, iyo sidoo kale isbeddel heer sare ah oo isbedelka cimilada.
Waxaa jira ficillo aan jirin "Rose of Winds", marka laga reebo inaadan awoodi doonin inaad u hoggaansamto dhammaan shuruudaha agrotechnik marka la koro.
Ma taqaanaa? Kala duwan ayaa lagu daray Diiwaanka Gobolka ee Guulaha Guryaha ee Ruushka ee 2003 iyo waa la kori karaa dalka oo idil.
Video: sharaxaad of yaanyo "Wind Rose"
Astaamaha miraha iyo dhalidda
Midhaha wareegsan ee "Rose of Winds" waa mid aad u weyn, xittaa dusha oo dhan, oo leh dhexdhexaad ah cufan, maqaar dhalaalaya. Marka bislaado, midabkooda ayaa isbeddelaya ka soo cagaaran ilaa casaan jilicsan, iyo marka la gooyey, waxaad ka heli doontaa mid casiir ah, oo aan yareyn dhexe, biyo dhadhan aad u qurux badan.
Waxaan kugula talineynaa inaad barato naasaha sii kordhaya ee noocyo kala duwan oo tamaandhir ah sida Carrot, Siberian Giant, Pink Spam, Eagle Heart, Sugar Pudovik, Cardinal, Makhitos, Doms Pink, Mikado Pink "," Krasnobay "," Bokele F1 "," Malachite Box "," Doll Masha F1 "," Khlebosolny ".
Yaanyadaas waxay leeyihiin unugyo tiro yar, laakiin sonkorowga, amino acids iyo beta-carotene waxay waxoogaa ka badan yihiin noocyo kale, sidaas darteed yaanyada waxay u fiican yihiin carruurta ama dadka cuntada ku jirta.
Guud ahaan, "Wind Rose" waxaa loo tixgeliyaa nooc saladh ah, maxaa yeelay waxay ka dhigtaa cunnada fudud, maraqa, saxanka kulul, suugada iyo baradhada la shiiday. Si kastaba ha noqotee, miraha ka baxsani waxay u adeegi karaan ilaha ugu wanaagsan ee casiirka tamaandhiga ah ee hoyga casaanka ah ee aan caadiga ahayn, iyo qaar ka mid ah dumarka guryaha xitaa isticmaala yaanyada noocyada kala duwan ee kaydka. Harvest waa la goyn karaa 95-97 maalmood ka dib caleemaha ugu horeeya, iyo min 1 m² of territory waa suurtagal ah in kor u ilaa 7 kg oo yaanyo bislaado. Dhammaantood waxay u kobciyaan si isku mid ah, laga bilaabo dhammaadka Julaay ilaa bilowgii Sebtembar.
Waa muhiim! Marka goosashada, waxaa muhiim ah in si taxadar leh looga saaro midhaha oo dhan, isla markiiba tuura shayada la gooyey ama dillaacday, tan, ka dib markii la jiifa wax yar oo la goosanayo, waxay si deg deg ah u dhufan doonaan.
Dabeecadda "dabayshu kacday" waxa loola jeedaa hore u bislaaday, markaa waxaa lagula talinayaa in lagu beero geedo dabayaaqadii Maarso ama horraantii Abriil. Ciidda for yaanyada waa in ay noqdaan iftiin iyo sida nafaqo leh sida ugu macquulsan, isku daraya ciidda beerta iyo peat.
Ka hor inta beero, waxaa lagu talinayaa in jeermiska substrate by by calcining ama ku qaboojiso, iyo waxa faa'iido leh in lagu daaweeyo abuurka iyaga oo leh kiciya kicin. Si ay u beerto alaabta si ay u kaco si fiican, heerkulka qolka leh geedo waa in aanay hoos u +25 ° C. Sida ugu dhakhsaha badan caleemaha ugu horeysay ee u muuqdaan, waxaad soo qaadan kartaa warshad dhalinyaro ah, halka bacarimiso geedo leh Bacriminta adag.
Waxaan kugula talineynaa inaad ka akhridid ​​sida loo abuuro uguna kaco geedo yaanyo, goorta iyo sida loo yareeyo yaanyada, sida iyo goorta ay u beeri doonaan geedo yaanyo ah oo dhulka hoostiisa ah.
Waa suurtogal in la beero geedo ciidda furan horraantii Juun, sida ugu dhakhsaha badan dhulka ayaa si fiican u kululaanaya. Sida for qaabka beerto, waxaa lagula talinayaa inay ka tagaan inta u dhaxeysa duurka ugu yaraan 40 cm, iyo inta u dhaxaysa saf - 60-70 cm.
Kadib markaad sariirta soo degto "Wind Rose" ayaa toddobaadkiiba mar la waraabiyaa biyo diirran oo kala duwan, inta badan fiidkii ama subixii. Ciid ka yar geedo bacrimiyey 1 jeer dhowr bilood, isticmaalaya fosfate ama Bacriminta potash.
Ma taqaanaa? Tilmaamaha ugu horreeya ee yaanyada yurubiyanku waxay dib ugu noqdaan 1855. Markaa Talyaaniga waxaa loo yaqaan "tufaax dahab ah" - tani waa sida erayga "pomo d'oro" loo tarjumay.
Haddii aadan haysan waqti aad ku samayso geedo, waxaad isla markiiba ku beeran kartaa abuurka beerta.
Si kastaba ha noqotee, xaaladdan, waa inaad u hoggaansantaa xeerar dhowr ah oo muhiim ah:
qorshaha loo doortay beeritaanka waa in la daboolaa oo si wacan loogu daboolaa filim;
Waa faa'iido leh in la daadiyo dhammaan ceelasha biyo kulul, iyo ka dib markaad abuurayso iyaga, ku dar digir;
Ha ilaawin inaad si joogto ah hawada u furtid, marwalba furo filimka, iyo sida ugu dhakhsaha badan cimiladu waa mid deggan oo diirran, hoyga waa laga saari karaa.
Kala duwan yaanyada "Wind Rose" waxaa lagu gartaa iska caabin dheeraad ah "cudur" yaanyo iyo cayayaanka, laakiin tani macnaheedu maaha in ka hortagga uu noqon doono mid aad u sarreeya. Sidaa darteed, buufinta joogtada ah ee biyo saabuun ahi uma oggolaanayo muuqaalka aphids, iyo xalka ammonia xallin doono dhibaatada slugs.
Calaamadaha ugu horreeya ee dabaylo goor dambe ah (dhibco caleemo ah caleemaha iyo miraha), dhammaan qaybaha ay saameysay ee geedka waa in laga saaraa, qaybaha haray waa in lagu daaweeyaa xeryahooda bakteeriyada leh.
Waa muhiim! Haddii thrips ay xiiseynayso beeritaanka yaanyada, markaa cayayaanka kaliya ayaa kaa caawin doona in laga takhaluso, waxaa loo oggol yahay in loo isticmaalo kaliya illaa khudaarta muuqata.
Muuqaalka muuqaalka dhibcaha jilicsan ee calaamadiisu ku xigto cawsku waxay muujinaysaa la'aanta kalsiyumka "jirka" ee dhirta, iyo quudinta nalalka kalsiyalka ayaa caawin doona xallinta dhibaatada.
Waxaan ku talinaynaa in aan wax ka akhrino waxa ay yihiin cudurrada yaanyada, iyo sidoo kale hababka looga hortagayo.
Dabayshu waxay kordhay noocyo kala duwan oo yaanyo ah oo u qalma dareenka xitaa kuwa bannaanka u ah kuwaas oo hore u beeray dhowr nooc oo yaanyo ah ee lagu koriyo. Daryeel aan qabyo ahayn iyo goosashada dhadhan fiican leh waxay dhirta ka dhigtaa fursad wanaagsan oo ay u sii kordhiso gobolka, sidaas awgeed aad bay ugu faraxsan yihiin bannaanka u badan.
Dabayshu way ka soo kacday Biotechnics: Kala duwanaantu maaha mid xun, miisaanka aan la gaarin ma gaadhin, noocyada kala duwan waxay u egtahay in ay dhexdhexaad tahay dhexdhexaad ah, marka dalagga uusan ahayn wax ka badan 3 kg.
Sharaxaad ka socota xirmooyinka: Waa mid aad u adkaysi u ah xaaladaha aan fiicneyn, qaboobaha wakhtiga gaaban, noocyo badan oo yaanyo ah ayaa la abuuray. Miraha waa dhif u ah noocyada caadiga ah ee midabka casaan. Xataa iyada oo xaalado aan fiicneyn, dhalidda ka soo baadiyaha waa 4.5-5 kg! Kala duwan waa xilliga Bisaylka ugu horeeya ee dhirta laga bilaabo biqilka si fruiting 95-97 maalmood. Kuurku waa mid caadi ah, istaagsan, qumman, 35-45 cm oo dheer. Caleemuhu waa cagaar mugdi ah, isugoobey. Miraha waa casaan, wareega, fareeshka, dhadhanka sare. Miro miisaankiisu yahay 120-130 g. Midhaha miraha waxay leeyihiin tayo wanaagsan oo hagaagsan, gaadiidka. Ujeedada miiska ujeedada, laakiin waxaa loo isticmaali karaa soosaarka casiirka, pickling iyo caanaha. Darajada waxaa loogu talagalay beerista dhul furan iyo filim iyo hoy. Abuuray Abriil 2014 sadex nooc: Rose of Winds, Nezhdanna, Zheltoplodny. Dabaysha ayaa bilaabantay inay dib u dhacdo waqti dambe oo dhan. Waxay ku koray laba koriyo, meelo fiican, oo ka soo jeeda dhinaca koonfureed. Caleemaha ayaa si joogta ah loogu daboolay "nabraha", waa inay si joogta ah u soo qabtaan. Caleenta wuxuu ka yaraa kiilo laga bilaabo baadiyaha. Sidaa ayay dhacday. PS First First Nezhdanna ayaa u dillaacday, ka dibna Yellow-fruited (laakiin wuxuu leeyahay miraha ugu weyn), oo ay ku xigto Wind Rose.